"Jinsi ahaanta iyo Nidaamka Dagaal": Sannad-guurada iyo Tarjumidda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Laga soo bilaabo jumlada tarjumaada Kuuriya ee dhowaan la daabacay ee "Galmada iyo Nidaamka Dagaal."
Qoraalkan saddexaad ee taxanaheenna gaaban ee "Cusbooneysiinta Haweenka, Nabadda, iyo Amniga, ”Wuxuu soo bandhigayaa Epilogue ee tarjumaadda Kuuriya ee dhowaan la daabacay ee" Jinsi iyo Nidaamka Dagaal "ee Betty Reardon (hoos loo soo dejin karo xiriirka hoose). Kani waa kan ugu horreeya ee laba qoraal oo loogu dabaaldegayo tarjumaadda daabacaaddan taariikhiga ah.
Ku soo dejiso Epilogga tarjumaadda Kuuriya ee "Jinsiga iyo Nidaamka Dagaal" [Ingiriis]
Isla caqli galnimada [amarka kala sareynta jinsiga ee labalaableyda ah] waxay taageertaa cunsuriyadda, gumeystaha, heterosexism, anthropomorphism-ka wax baabi'iya meeraha, iyo dhammaan ifafaalaha aargoosiga adduunka ee kala sarreynta ayaa soo ifbaxay. Waxay ku tusaysaa: sheegashooyinka sida sarraynta caddaanka iyo rabshadaha "xaqa ah" ee lagu galay in lagu soo celiyo; xagga xaqiraadda iyo cadaadiska haweenka hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha; diidmada dhibaatada cimilada iyo u soo noqoshada argagixisada nukliyeerka. Dhaqanka lamaanaha wuxuu noqday mid lama huraan ah oo Dunida ka mid ah. Saamiyada badbaadada weligood kama sarraynin, weligood looma baahnayn baahi weyn oo sinnaanta jinsiga ah, iyo deg-degga ah ee jawaab dhammaystiran ee badbaadada aadanaha iyo meeraha marna ma muuqan.
Aabbanimada sida muuqata bilawga tobanka sano ee saddexaad ee 21st Qarniga waxaa loo arki karaa inuu ka dhib badan yahay sidii aan u fahamnay inuu ahaa 1985. Feminism-ka hadda wuxuu siinayaa muhiimad la mid ah soo celinta deegaanka sida ay u tahay joojinta dagaalka iyo ku guuleysiga sinnaanta jinsiga, qaarna hadda waxay u arkeen Dunida inay lagama maarmaan tahay inay la mid ahaato baabi'inta ee nidaamka dagaalka sida ay tahay sinnaanta jinsiga. Qaabdhismeedka haweenku wuxuu hadda fahmayaa dhammaan dulmiga aadanaha ee ka soo jeeda awoowe. Midab takoorka, gumaysiga, heterosexism, anthropomorphism, dhamaan "issimada" la xusay ee ku soo rogaya u nuglaanta qaabdhismeed iyo nidaam ee qaybaha gaarka ah ee noolaha, waxay ku jiraan xuduudaha walaaca dumarka, maaddaama cadaadisyadan ay si xoog leh u kobcinayaan madax dhaqameedyada iyagoo doonaya inay qeexaan iyo xakamee adduunka "dhabta ah".
-Betty A. Reardon. (Laga soo bilaabo Epilogue ee tarjumaadda Kuuriya ee "Galmada iyo Nidaamka Dagaal.")
Galmada iyo Nidaamka Dagaal: Sannad-guurad iyo Tarjumid
Sannad-guurada lagu xusay guddiga fiidiyowga in bilaabay taxanahan on "Cusbooneysiinta Haweenka, Nabadda, iyo Amniga, ”Sadex waxay si gaar ah ugu qotomaan jagadan Epilogue-ka kan cusub ee la daabacay Tarjumaada Kuuriya ee Galmada iyo Nidaamka Dagaal waxaa lagu daabacay Seoul waxaa qoray Wood Pencil 35th sanad guuradii ka soo wareegtay markii ugu horaysay ee ay daabacdo macalimiinta kuliyada saxaafadda. Waxaa jira, dabcan, kuwa aadka loo sheegay 20th sannad-guurada UNSCR 1325 iyo 25th oo ka mid ah Shirka Afaraad ee Haweenka. Hase yeeshe, waxaa sidoo kale jiray seddex dhacdo oo khuseeya kuwaas oo helay feejignaan yar: 70th sanadguuradii bilowgii Dagaalkii Kuuriya, isla maalintii gudiga la duubay, Juun 24th; ah 20th sanad guurada Maxkamada "raaxada dumarka" in la dhisay anshax haddii aan si buuxda loo aqoonsan mas'uuliyadda sharciga ah ee addoonsiga galmada haweenka ee waddammada ay qabsadeen millatariga Japan intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka; iyo 5tath sanad guuradii ka soo wareegtay markii ugu horraysay ee hal-abuurka haweenka ee caalamiga ah si Dagaalkii Kuuriya loo soo afjaro sarkaal rasmi ah iyadoo la soo gabagabeynayo oo la saxiixayo heshiis,Haweenka iskutallaabta DMZ, ”Kaas oo kaqeyb galayaasha video Kozue Akibayashi kaqeyb qaatay. Mid kasta oo ka mid ah labadan ugu dambeysa liiskan dhacdooyinka wuxuu u taagan yahay muhiim, haddii uu aad u xaddidan yahay, horumarka laga gaadhay himilada dheddig-nimo ee adduun ka xaq-daran, rabshad yar.
Jeldiga tarjumaadda Kuuriya 2020 (bidix) iyo daboolka asalka ah ee "Galmada iyo Nidaamka Dagaal."
Marka la eego himilooyinkaas, iyo isbeddelka fikirka iyo siyaasad dejinta ee loo baahan yahay in lagu horumaro xaggooda, waxaan ku helay niyad-jab in la akhriyo, “Bidixdu waa Dib-u-habaynta Siyaasadda, ”Bogagga ra’yiga ee The New York Times, (Amna A. Akbar, July 12, 2020, p. 2). Muddo dheer ayaan u ololeynayay dib-u-habeynta siyaasadda, waxaan u muuqdaa inaan dib uga laabto ereyada "bidix," "midig" iyo "dhexda", maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inay asal ahaan ka soo jeedaan qaabka ugu weyn ee fikirka siyaasadeed ee aan u arko inay ka soo horjeeddo aragtiyaha iyo himilooyinka fikirka haweenka. ku saabsan nabadgelyada iyo amniga, iyadoo la daneynayo in la xaddido noocyada kala duwan ee fikirka ee dib u habeynta siyaasaddu u baahan doonto. Si kastaba ha noqotee, ereyga, bidix, sharraxaha ugu muhiimsan ee jilayaasha siyaasadeed wuxuu sameeyay arrimo badan oo caddaalad ah, wuxuu qoraagu ugu yeeray inuu u dabaaldego isbadal suurtagal ah ee dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Mareykanka, oo ay soo abaabushay abaabul lagu cambaareynayo laguna tirtirayo midabtakoorka nidaamsan, hadda sidaa darteed gabi ahaanba lama dafiri karo caddaynta muuqaalka iyo meelkastaba leh ee rabshadaha booliska ee ka dhanka ah dadka midabka leh. Markaa waan ku farxay markaan ku arkay qaybta wargeyskan "aasaaska ah". Qormadu waxay si cad u muujisay rajada aan ka qabay toddobaadyadan mudaharaadyo badan oo kala jinsi ah, isimo kala geddisan, dhinacyo badan, jidad ballaadhan, maalinba maalinta ka dambaysa sii socota, in kasta oo ay tahay siyaasadda hadda jirta, inay naga sii dhawaato ugana sii dhowaato abgaarta suurtagalka ah ee aan ku tilmaamayo "Epilogue" . ” Aragtida Amna A. Akbar waxay si kalsooni leh u cadeysay in isku soo dhawaanshahan uu ahaa natiijada aragti wax ku ool ah oo ku saabsan fursado kale, iyo aqoonsiga iyo xaqiijinta dalabyada iyo istiraatiijiyadda dhaqdhaqaaqayaasha, isdhexgalka shaqeynta ee ka socda arrimaha badan ee rabshadaha iyo caddaalad darrada ay matalayaan kaqeybgalayaasha abaabulku. . Waxay ku shaqeynayaan ballanqaadkii sanado ka hor lagu sheegay Shirka Rio ee deegaanka, in istiraatiijiyad wax ku ool ah si loo gaaro aragti dhammaystiran, "Adduun kale ayaa suurtagal ah." Taasi waa ballanqaadka aan dooneyno inaan ku iftiiminno taxanahan maadaama aan baareyno walaacyo kala duwan iyo fursado muhiim u ah dhibaatada nabadeed ee haweenka.
NYTimes fekerka ayaa sidoo kale muujinaya sida dhakhsaha leh ee qoto dheer ee duruufaha siyaasadeed ee dhibaatada u isbeddelay, xitaa sanadkii laga soo bilaabo tan Epilogue la qoray. Xaqiiqdii, ujeeddada hal-ku-dhegga waxay ahayd in lagu milicsado horumarka ballaaran ee ka socda dhaqdhaqaaqa nabadda iyadoo loo marayo kaqeybgalka haweenka ee haweenka ee soo ifbaxay tan iyo daabacaaddii 10-guuradii Galmada iyo Nidaamka Dagaal waxaa qoray Syracuse University Press, 25 sano ka hor.
Waxaan rajeynayaa in akhristayaasha maqaalkani ay ka turjumayaan horumarka ku qeexan Epilogue-kan, iyo siyaabaha ay fursadaha wanaagsan ee dhexdooda ka mid ahi u noqon karaan suurtogalnimo haddii isu soo dhowaashadan iyo wada shaqaynta ka dhexaysa dadka u ololeeya iyo “[Dalabkooda] waxtarka leh ay abuuraan sababaha dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo arrimo badan iyo arrimo badan leh, rajadeenna keliya ee mustaqbal cadaalad ah. ”
Sheekaysiga iyo Xiriirinta: Nabadda Nabadda Haweenka
Isu-tagga Xuquuqda Aadanaha ee Waxbarashada Nabadda ee Midab-kala-sooca Koonfur Afrika oo hoos timaada COVID-19
April 19, 2020 Warar & Muuqaal 0
Waa seddex xagal xagga miyir-qabka ah ama Wacyigelinta, Naxariista, iyo Caddaaladda ee ka caawinaysa bulshada maxalliga ah aafada, waana mida nagu sii wadi doonta abuurista adduunyo aadaminimo, rabshad la'aan. [sii wad akhriska…]